somali pirates – The official Somali Historical
Guddi garsoor oo Maraykan ah ayaa ku taliyay in saddex ruux oo Soomaali ah oo loo haysta fal burcadeednimo lagu xukumo cumri xarig. Xeer beegtiga Dalka Maraykanka ayaa go’aankan ka soo saaray raggan oo lagu soo dacweeyay in Badweynta Hindiya ay ku dileen Afar qof oo Maraykan ah, oo saarnaa dooni yar oo ay lahaayeen. Dacwad oogayaasha Maraykanka waxay doonayeen ...
Qarammada Midoobay ayaa sheegtay in burcad badeed ay qabsadeen labo Markab oo Iran laga leeyahay. Waxaa lagu qabsaday xeebaha Soomaaliya, waxa uuna noqonayaa afduubashadii u horaysay ee ka dhacda xeebaha Soomaaliya tan iyo sanadkii 2012-kii. Xafiiska Daroogada iyo dambiyada ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in maraakiibtaasi ay saarnaayeen 48 shaqaale ah, ayna si sharci daro ah uga kaluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. ...